लोकप्रिय बन्दै यांगलर अफरोड गाडी, यस्ता छन् विशेषता | Artha News Nepal
Home	यातायात	लोकप्रिय बन्दै यांगलर अफरोड गाडी, यस्ता छन् विशेषता
नेपाली बजारमा केहि महिना अगाडी मात्रै भित्रिएक अफरोड गाडी जिप यांगलर लोकप्रिय बन्दै गएको छ । नेपालका आधिकारीक वितरक रहेको एमएडब्ल्यु ग्रुपले केहि महिना अघि मात्रै नेपाली बजारमा भित्र्याएको यांगलर आकर्षक लुक्स र नेपाली बाटोको लागी सुहाउदो अफरोड गाडी भएका कारण लोकप्रिय भएको हो । अमेरिकन ब्रान्ड जिप अफरोड र एडभेन्चर राइडका लागी यो गाडी नेपालमा मात्रै नभइ विश्वभर लोकप्रिय छ ।
यांगलर फोरह्विल सिस्टम, एलईडी हेडल्याम्प, फुल फ्रेम रिमुभेवल डोर, २१.३ सीएम टचस्क्रिन दिइएको छ । इन्टेरियरमा लक्जरी लेदर सिट, लोभलाग्दो डिजाइनले ग्राहकलाई आकर्षित गर्छ । २ हजार सीसीको गाडीमा ८ स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसन, अधिकतम पावर २०१ किलोवाट र टर्क ४०० एनएम जेनेरेट गर्छ ।
त्यस्तै, यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २६० एमएम रहेको छ। जसले पहाडको जस्तो सुकै बाटोमा यात्रा गर्न कुनै समस्या हुँदैन । सुरक्षाको लागि एबिएस सहितको दुवै डिस्क ब्रेक रहेको गाडीमा एयरब्याग, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टमलगायत विभिन्न विशेषता यो गाडीमा रहेको छ । ८ स्पिड ट्रान्समिसन, प्रतिलिटर १० किलोमिटर माइलेज, टप स्पिड प्रति घण्टा १८० किलोमिटर रहेको छ । नेपाली बजारमा ५ ओटा कलरमा आएको यो गाडीले नेपाली सडकमा राम्रो उपस्थिति जनाउन थालेको छ। बजारमा यो गाडी ब्राइट ह्वाइट, ब्ल्याक, क्रिस्टल, स्टिङ ग्रे र फायर क्रेकर रेडमा उपलब्ध रहेको छ ।
खासगरी रुबीकोन, सहारा र ग्लाडिएटर भेरियन्टमा यांगलर नेपालमा उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाई छ । नेपाली बnew brand
जारमा रुबीकोनको सुरुवाती मूल्य २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने सहाराको मूल्य २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपाल भित्रिएपछि जिप यांगलर झन्डै तीन दर्जन बिक्री भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
new brand in marketnew brand pure etrance niyowranglerwrangler in marketwrangler new brandyanglar
हवाई भाडा कुन रूटमा कति बढ्यो ? (सूचीसहित)
नेपालमा इलेक्ट्रिक एसयुभि गाडी आउने, मूल्य कति ?
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो, यस्तो छ नयाँ भाडादर